‘भीआईपी बस्ने एरिया’ को यस्तो छ है हालत… ! — Newskoseli
‘भीआईपी बस्ने एरिया’ को यस्तो छ है हालत… !
‘भन्नलाई भीआईपी बस्ने एरिया रे सार्वजनिक यातायातको हालत भने यस्तो छ । साझा बस पनि जम्मा दुइृ वटा चलेको छ, कति बेला आउँछ भन्ने पनि थाहा छैन ।’ मंगलबार बेलुका रत्नपार्क-जावलाखेल-भैंसेपाटी-चुनिखेल रुटको बसका दुई यात्रुले गरेको कुराकानी हो यो ।
दुई दर्जन यात्रु क्षमता भएको मिनी बसमा कोचिएर यात्रा गर्दाको सास्तीबरे यात्रुले कुरा गरिरँदा सहचालक भने यात्रुलाई बसभित्र कोच्दै थिए । ‘मिलेर बस्नुस्, यता घुम्नुस्, उता घुम्नुस्’ सहचालक यात्रुलाई भन्दै थिए । बसभित्र कोचिएर बसेका यात्रुहरु सहचालकको जबरजस्तीले सरिरहेका थिए ।
भैँसेपाटी सुविधासम्पन्न ठाउँका रुपमा परिचित छ । यो क्षेत्रमा नाम चलेका कलाकार, पत्रकार, नेता, पूर्वमन्त्री, राजदूत र उच्चपदस्थ व्यक्तिको बसोबास छ । त्यसैले यो ‘भिआइपी क्षेत्र’को रुपमा चिनिन्छ । तर, यो क्षेत्रमा सार्वजनिक सवारी व्यवस्थित नभएको खबर शुक्रबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।